» “बला त्कार हो भने, नाबालिकाले किन, प्रतिकार गरेन? त्यही बेला किन भनेन ? : ब्युटीसियन सुस्मा महर” “बला त्कार हो भने, नाबालिकाले किन, प्रतिकार गरेन? त्यही बेला किन भनेन ? : ब्युटीसियन सुस्मा महर” – हाम्रो खबर
“बला त्कार हो भने, नाबालिकाले किन, प्रतिकार गरेन? त्यही बेला किन भनेन ? : ब्युटीसियन सुस्मा महर”
“अभिनेता पल शाह यति बेला हिरासतमा छन। १७ वर्षीया एक गायिकाले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा शाहविरुद्ध जाहेरी दिएपछि उनि हिरासतमा छन्।शाह र ती गायिकाबीचको सम्बन्धको विषयले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। सोही अवस्थामा गायिकाले जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्।
“नेपालको कानुन अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कसैसँग सहमतिमै शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राखे पनि कर णी ठहरिने व्यवस्था छ। सोही कानुनका आधारमा पीडितले जाहेरी दिएकी हुन्।
“कलाकार दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईंले बुधबार दमौली आएर पीडितकै पक्षमा बयान दिइसकेका छन्। प्रहरीले हिरासतमा रहेका शाहसँग बयान लिए पनि उनले आरोप स्वीकार गरिसकेका छैनन्। उनले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा पीडितसँग एउटै घरमा बसे पनि शारीरिक सम्पर्क नभएको बयान दिएका थिए। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने नाबालिकाको कन्याजाली च्यातिएको प्रतिवेदन आइसकेको छ।
“मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई कर णी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै किशोरीलाई कर णी गरे निजले त्यस्तो महिला वा किशोरीलाई ज’बर्ज”स्ती क’र’णी गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ। ‘१८ वर्ष नपुगी भोट हाल्न दिइँदैन, कुन पार्टी राम्रो, कुन पार्टी नराम्रो छुट्याउन सक्दैनन्, सेवा गर्न, जागिर खान पाइँदैन, मजदुरी गराउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको त्यो प्रकारको चेतनास्तर, सामाजिक विकास र क्षमता विकास भएको हुँदैन ।
“होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई ‘मञ्जुरी’ नमानिनेसमेत कानुनमा उल्लेख छ। तर, शाहले भने गायिकासँगको शा’री’रि’क स’म्ब’न्धलाई सहमतिमै भएको स्विकारिसकेका छन्। यो घटनामा मध्यराति १२ बजे एसएमएस गरेर कसैको कोठामा परिपक्व भएको कोही पुरुष आउँछु भन्नु नै महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएको उनले बताइन्।